Waadaa Haaroomsaan galle bu'aatti jijjiiruun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf cimnee hoojjanna - ODP - | - OBN
Waadaa Haaroomsaan galle bu'aatti jijjiiruun olaantummaa seeraa mirkaneessuuf cimnee hoojjanna - ODP
Oromo Dimokiraatik Paartii (ODP) haala yeroorratti ibsa Ejjennoo har'a baaseen, ODP/ADWUI biyyaafi Naannoo keenya keessatti misoomaafii sirni dimokiraasii hirmaannaafii fayyadamummaa ummataa sadarka sadarkaan mirkaneessan akka hojiirra ooluuf waggoottan darban carraaqqii ballaa taasisaa turuu yaadachiiseera.
Qabeenyi uumamaafii humna namaa biyyattiin akka ka'uumsa kaappitaalaatti qabdu karaa qixa ta'een qindeessuun qabeenyatti jijjiiruun misooma saffisaa itti fufiinsa qabuufii ummanni sadarka sadarkaan irraa fayyadamaa tahu dhugoomsuuf tarsiimoowwan taa'an hojitti jijjiiruuf carraaqqiin ballaan taasifamee jiruu himeera.
Misoomni dimokiraasiin keessatti hin dhugoomne kophaa isaatti galma waan hin taaneef qajeeltoo sirna paartiilee hedduufii filannoo buu'ura taasifachuuniis heeraaf seeraan hojii hoojjechuun haqummaan akka dhugoomu darbees mirgi namoomaa karaa kamiinuu sarbamuu akka hin qabne dimokiraasiifii nageenyi dhimmoota gargar bahamanii hin ilaalamne tahuu isaa hubachuun itti hoojjetamaa turee jira.
Yaa ta'u malee hojiin hoojjatameefii bu-aan argame yoo wal bira qabamee ilaalamu baayyee wal gataa ta'uu isaafi sanirra darbee wal faalleessaa tahuu isaan walitti dhufeenyi ummataaf paartii sadarkaa adda cituurra ga'ee ture.
Rakkoo olaantummaan seeraafii mirgi namoomaa sarbamuu kun iddoo tokkotti dhaabbatee biyyaafii naannoo sirni dimokiraasii dhugaa itti mirkanaawee fayyadamummaan diinagdee nama dhunfaarraa qabee hamma biyyaa gahu haqa qabeessaafii iftoominaan tahuu akka qabu ijjannoo cimaafii kutannoon paartiin keenya haaroomsatti gale.
Diinagdee muraasa karaa sirriin guddisaa ummata fayyadamaa gochuu caalaa gochi angotti dahatanii kiisha ofii itti guuttachuuf taasifamu hundeen isaa akka ciccitu tarkaanfiin saamicha lafaa maqaa invastimantiitiin raawwatameefii sirna maallaqaa biyyattiirratti fudhatamees abdii lammii kan ibseefii kan saamtootaa ammo kan dukkaneessedha.
Kana qofa otoo hin tahin qaamoonni sarbamuu birga namoomaatiif kallattiiniis ta'e al kallattiin ga'ee qaban seeraan gaafatamanii olaantummaan seeraa akka kabajamu kutannoofi ijjannoo cimaa Paartiin keenya haaroomsarratti qabsaawaafii ture kunoo bu'atti jijjiiramuu eegaluu isaaf tarkaanfii Mootummaan Federaalaa fudhachaa jiru kun qaama wa-aada haaroomsa keenyaan ummataaf gallee akka ta'e ODPn akka amanu mirkaneesseera.
Kanaaniis waadaan keenya hojitti jijjiiramee olaantummaan seeraa akka mirkanaawuuf tarkaanfii Mootummaan Federaalaa fudhachaa jiru ODPn dinqisiifannaa ol'aanaan kan ilaaluufi tumsa irraa eeggamu taasisuuf qophaawoo tahuu isaa beeksiseera.
Tarkaanfiin kunis biyyaafii naannoo keenya keessatti haqaafii seeraan hojjechuu qofti wabii akka ta'u qabeenya ummataa saamaa, karaa qaxxaa muraan badhaadhuun lamuu biyya kana keessatti karaa kamiinuu qaawwa akka hin arganne kan taasisuufii Olaantummaan seeraa akka kabajamu daandii kan saaquudha jedheera.
Fiigichi keenya kan addunyaan dorgomuu kan milkaawu fiigicha qocaa otoo hin ta'in fiigicha illeettii yoo tahe qofa.
Uummanni keenya akkuma kaleessaa ijaaf gurra nuu ta'ee bakka tolchinetti nu galateeffachaa bakka balleessinetti qeeqee karatti nu deebisaa sadarkaa harra jirrurra akka geenyu ga'ee olaanaa gumaache harraas hattuun yoomuu ijaaf gurra ummataa jalaa waan hin miliqneef Ummanni Naannoo Keenyaa gochaa seeraa alummaa kamirrattuu tumsa godhu cimsee itti fufuu akka qabu ODPn carraa kanaan waamicha dabarsuu barbaada jechuun ibsasaa goolabeera.
734 Views 11/15/18